10-ka Aroos ee ugu Qaalisan Adduunka 2022 Kiiky Wealth -
Bogga ugu weyn 10 Arooska Ugu Qaalisan Aduunka 2022
Weligeed ma meher aan qaali ahayn baa dhacay? Waxaa laga yaabaa inaysan qiimo qaali ah ku fadhiyin, laakiin kaalay, aroosyadu waa mid ka mid ah dabaaldegyada ugu qaalisan adduunka. Qiimaha aroosyada qaarkood ma heli karaan hal laakiin laba diyaaradood oo khaas ah!
Wax lagu qoslo, waxaad leedahay? Laakiin waan jecelnahay iyaga weyn oo qurux badan. Aroosyadan ayaa kaalimaha hore kaga jira liiska aroosyada ugu qaalisan aduunka.
Xusuusnow arooskaas maskaxdaada ka fogeeyay? Haa, dadaalkii galay qorshayntiisu ma yara. Qorshaynta aroosku waxay noqon kartaa hawl culus.
Lamaanayaasha qaarkood waxay doortaan inay qorsheeyaan aroosyadooda, iyagoo qaadaya mas'uuliyadaha badankooda laakiin dhimista qarashka halka kuwo kale oo badan doorbidaan inay shaqaaleeyaan xirfadlayaal si ay u maareeyaan una yareeyaan mas'uuliyadaha iyadoon loo eegin sida qoto dheer ay ugu jiraan boorsooyinkooda.
Dhanka kale, maqaalkan, waxaan kaga hadli doonnaa aroosyada ugu qaalisan adduunka.
Waa imisa Qiimaha Arooska raaxada?
In kasta oo inta badan dabbaaldegga ururrada lammaanaha ay isku mid yihiin, aroosyada waxaa ka buuxa caadooyin ku kala duwan dhaqanka iyo caadooyinka mararka qaarkood qaali ah. In kastoo, sida ay qaali u noqon karaan aroosyadan waxay ku xiran tahay dhaqanka/dalka.
Tusaale ahaan, aroosyada Mareykanka waxay ahaayeen kuwa ugu qaalisan n adduunka. Sanadka 2019, celceliska kharashka arooska Mareykanka wuxuu ahaa $ 29,200.
Haddii aad ka mid tahay dad badan oo ku riyoonaya inay yeeshaan aroos raaxo iyo xamaasad leh, waa inaad diyaar u ahaataa inaad jarto jeeggaas waayo qaar ka mid ah waa kuwo qaali ah.
Arooska raaxada leh wuxuu ku kici karaa ilaa $ 100,000, tanina waxay kaliya u tahay xafladda iyo walxaha qurxinta oo keliya. Qiimaha martida kuma jiraan tiradaas.
Si arooska loogu tixgeliyo mid raaxo leh, qiimaha martida badanaa waa qiyaastii $ 1000. Laakiin markaa, sida ay noqoto, ku kharashgaraynta doonnida dhacdada maahan waxa kaliya ee sameeya aroos raaxo leh; kaamilnimada, qaabka, iyo gaar ahaanshuhu sidoo kale waxay soo galaan ciyaar.
Dhaqan ahaan, aroosyada boqortooyadu inta badan waa raaxo. Isweydaarsiga boqornimada ee nidarrada guurku waxay yeelan kartaa boqolaal ilaa kumanaan marti ah iyo miisaaniyad baaxad leh. Labbiska aroosyadu waa sharaf, qurux iyo qaali. Tirada badan ee qurxinta astaamaha, bandhigyada iyo keegga - keega! Waxaas oo dhami waxay gacan ka geystaan ​​in arooska laga dhigo mid xarago leh. La yaab ma leh in arrimahan boqornimadu u muuqdaan inay soo jiitaan indhaha adduunka.
Arooska boqortooyada ee ugu qaalisan waa arooskii boqornimada ee 1981kii Sheekh Maxamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, amiirkii Abu Dhabi, iyo Amiirad Salama. Garoon leh 20,000 oo kursi ayaa loo dhisay dabaaldega 7-da maalmood ah. Qiyaasta waxay ahayd qiyaastii $ 100million - £ 75.5million.
XIDHIIDHKA: 25ka Shabakadaha Kaaliyaha Virtual ee ugu sareeya
Sheekhu wuxuu booqday magaalo kasta oo ka tirsan Imaaraatka isagoo faras saaran toddobaadka dhexdiisa wuxuuna quudiyey dadkii degganaa. Kani wuxuu lahaa sheeko aroos Aladdin iyo Princess Jasmine oo dhan.
Haddii aad waligaa ku riyootay inaad xirato cirfiid ilaah-hooyadiis arooska arooska arooskaaga, waxaa jira kuwo aad u badan, oo waxaad u baahan tahay oo kaliya waa dhowr milyan oo doolar.
Mid ka mid ah goonnada arooska ayaa ah naqshad uu sameeyay naqshadeeye Masaari ah, Hany El Behairy.
Goonnada ayaa ah dharka arooska oo la isku qurxiyo oo lagu daboolay dhowr boqol oo dheeman iyo dhagaxyo qaali ah.
Waxay leedahay tareen dheer iyo xijaab shalash ah oo lagu xardhay wax ka sii badan dheeman.
Intaa waxaa sii dheer, dharkan quruxda badan wuxuu qaatay ku dhawaad ​​800 saacadood oo shaqo ah qiimihiisuna waa $ 15million si uu u kasbado magaciisa sida dharka arooska ugu qaalisan adduunka. Ka hadal dharka arooska Cinderella!
In kasta oo lammaaneyaasha qaarkood ay isku dayeen inay tijaabiyaan ikhtiyaarro jaban oo loogu talagalay dabaaldegyada arooskooda, qaar waxay go'aansadeen inay kor u qaadaan oo daamanka iska tuuraan.
Hadaba waxaan idiin soo gudbineynaa 10-ka Aroos ee ugu qaalisan taariikhda casrigan;
#1. CHARLES PRINCE AND LADY DIANA.
Meherka ugu horreeya ee ugu qaalisan liiska waa kan Amiir Charles iyo Lady Diana.
Arooskan ayaa dhacay sanadkii 1981 -kii.
Intee in le'eg ayay ku bixiyeen arooskan, waxaad weydiin kartaa. Waxay ku kharash gareeyeen $ 110million arooska.
Waxay lahaayeen 3500 oo marti ah waxayna xaflada u sii daysay 750 milyan oo daawadayaal adduunka oo dhan ah.
Dharka Princess Diana waxaa lagu sharraxay luul qiimihiisu yahay $ 150,000 oo doolar wuxuuna lahaa tareen 25-foot ah. Aroosku wuxuu lahaa 27 keeg oo aroos ah. Ka hadal aroos macaan.
Tani waa mid ka mid ah aroosyada ugu qaalisan adduunka.
Sidoo kale akhri: 10 -ka shey ee ugu qaalisan Adduunka 2022 -ka
#2. VANISHA MITTAL IYO AMIT BHATIA.
Waxaa liiska ku xiga Vanisha Mittal iyo Amit Bhatia arooskooda.
Xafladda meherka ayaa lagu qabtay meel u dhow Paris sannadkii 2004 waxayna ku bixiyeen $ 66 milyan. Waxaa ka soo qayb galay in ka badan 1,000 marti.
Farshaxanka caalamiga ah iyo jilaa Kylie Minogue ayaa la siiyay lacag dhan $ 330,000 si ay u qabato nus saac.
Aroosaddu waa gabadha mid ka mid ah ragga ugu taajirsan adduunka, sidaa darteed la yaab ma leh in aroosku ka mid yahay 3 -da aroos ee ugu qaalisan adduunka.
#3. PRINCE WILLIAM IYO KATE MIDDLETON.
Kan saddexaad ee liiska ku jira waa aroos kale oo boqortooyo ah.
XIDHIIDHKA: Lacag intee leeg ayaa ku jirta ATM? Intee in le'eg ATM ayaa qaban kara
Meherka waxaa loogu talagalay Amiir William iyo Kate Middleton. Waxay ku bixiyeen lacag dhan $ 34 milyan.
Arooska ayaa lagu qabtay 2011 Westminster Abbey waxaana loo yaqaanay arooskii qarniga.
Arooskan boqornimadu wuxuu ahaa heshiis aad u weyn oo ah $ 34 milyan iyo gogosha arooska Kate oo ahayd $ 434,000 Sarah Burton oo loogu talagalay goonnada Alexander McQueen.
Ugu dambayntii, 1900 marti ah ayaa ka soo qaybgalay.
#4. ANGELABABY IYO HUANG XIAOMING.
Arooska afaraad ee liiska ku jira waa mid Shiineys ah. Angelababy oo loo yaqaan 'Kim Kardashian of China' iyo arooska jilaaga Huang Xiaoming ee sanadka 2015 waxaa ku baxay $ 31 milyan.
Sida xaqiiqda ah, dharka arooska ee aroosadda ayaa ahaa Dior caadadii, waana mid ka mid ah dharka arooska ee ugu qaalisan. Waxay lahaayeen in ka badan 2,000 oo marti ah. Arooska ayaa lagu qabtay Xarunta Bandhiga Shanghai waxaana goobta gabi ahaanba lagu qurxiyay ubaxyo.
Waxay kaloo haysteen keeg aroos oo dhererkiisu yahay 10 fuudh oo leh lakab dhexe oo carousel ah.
Read 10 Kamaradaha Ugu Qaalisan Aduunka Sanadka 2022
#5. MICHAEL JORDAN IYO YVETTE PRIETO.
Arooskii shanaad ee ugu qaalisanaa adduunka ayaa la qabtay sannadkii 2013 -kii waxaana uu ahaa mid loogu talagalay kubbadda kolayga iyo xiddiga Space Jam Michael Michael arooskii labaad ee Yvette Prieto.
Xaqiiqdii, arooska ayaa ku kacay $ 10 milyan.
Waxay lahaayeen bandhigyo toos ah Usher, K'Jon, iyo Robin Thicke.
Dharka arooskeedu wuxuu ahaa dharka arooska J'Aton Couture oo lagu duubay kiristaalo Swarovski.
Goobtu waxay ku taal Bear's Club ee Jupiter, Florida, waxayna ku sugnaayeen 300 oo qof.
#6. LOLITA OSMANOVA IYO GASPAR AVDOLYAN.
Waxaan leenahay arooska gabadha VIP -da Ruushka iyo wiilka milyaneerka lambarka 6.
Arooska Lolita Osmanova iyo Gaspar Avdolyan, oo lagu qabtay sanadka 2017, Tiyaatarka Dolby, Los Angeles waxaa ku baxay $ 10 milyan.
Tiyaatarka Dolby waa isla goobta lagu qabto Oscars -ka. Maaha wax lala yaabo arooska qarash badan.
Dhab ahaantii, goobta waxaa lagu duubay ubax qiimihiisu yahay $ 500,000 iyo marin dahab ah.
Waxay haysteen Jason Derulo iyo Lady Gaga si toos ah arooska.
Dharka arooska ee aroosku wuxuu lahaa tareen 10-foot ah iyo 100 gacmo-goyn ah oo loo yaqaan Chantilly.
#7. WAYNE ROONEY IYO COLEEN MCLOUGHLIN.
Meherka toddobaad ee liiskayaga ku jira waa mid u dhexeeya Wayne Rooney oo Manchester United ah iyo Coleen McLoughlin.
Arooska ayaa lagu qabtay Abbey of Cervara oo u dhow Genoa, Italy sanadkii 2008. Arooska ayaa ku baxay 8 milyan oo doolar.
Lamaanuhu waxay kaalmo dhaqaale ka heleen majalad bixisa 4.2 milyan oo doolar oo loogu talagalay xuquuqda gaarka ah ee sawirada arooska.
XIDHIIDHKA: 10 Agab Software Software Sirdoonka Ganacsiga ugu Fiican 2022
Waxay lahaayeen 64 marti qaas ah oo ka yimid UK.
#8. CHELSEA CLINTON IYO MARC MEZVINSKY.
Meherka u dhexeeya Chelsea Clinton, gabadhii madaxweynihii hore ee Maraykanka Bill Clinton iyo Xoghayihii hore ee arrimaha dibedda iyo Senator Hillary Clinton iyo bangi maalgashi Marc Mezvinsky waa lambarka 8aad ee liiska.
Aroosku wuxuu ka dhacay Astor Courts Estate oo ku taal Rhinebeck, New York sanadka 2010, goobtu waxay lahayd aragti deggan oo jaceyl ah oo ku taal Webiga Hudson.
Chelsea ayaa soo xirtay laba go ’oo Vera Wang ah, mid ka mid ah goonnada ayaa lagu qiyaasay inay ku kacayso $ 20,000.
Dabaaldegga arooska oo dhan wuxuu ku kacay 5 milyan oo doolar waxayna joogeen in ka badan 500 oo marti ah.
#9. LIZA MINNELLI IYO DAVID GEST.
Fannaanka Liza Minnelli iyo dhiirrigeliyaha Bandhig -faneedka David Gest, oo lagu qiyaasay $ 4.2 milyan ayaa ah kaalinta sagaalaad ee liiska.
Arooska, oo lagu qabtay New York's Fifth Avenue sanadkii 2002 ayaa waxaa ka soo qeyb galay 600 oo marti ah oo ay ka mid ahaayeen Jackson Five, iyadoo Michael Jackson uu ahaa ninka ugu wanaagsanaa, Elizabeth Taylor oo ahaa maamuuska sharafta, guitarist -ka Brian May, Liam Neeson, Joan Collins, Gloria Gaynor, Anthony Hopkins, iyo Mia Farrow.
Waxay ahayd aroos aad u qurux badan.
Waxa kale oo aad rabi kartaa inaad tan akhrido: Meelaha lagu Iibiyo Dahabka Dahabka ah ee Khadka Tooska ah ee Dalabka ugu sarreeya sanadka 2022
#10. TAYLORKA ELIZABETH IYO FARMAAJO LARRY.
Arooskii ugu dambeeyay ee liiskan wuxuu dhex maray halyeeyga Hollywood Elizabeth iyo shaqaalaha dhismaha Larry Fortensky.
Sheeko qosol leh, waxay ku kulmeen dib u soo kabasho. Waa maxay fursadaha?
Xafladdii arooskoodu waxay lahayd 160 marti oo ay ku jiraan dhowr qof oo caan ah sida Liza Minnelli, Eddie Murphy, iyo Macaulay Culkin iyo kuwo kale.
Arooskeeda Siddeedaad wuxuu ku kacay $ 4 milyan, waxaa lagu qabtay Michael Jackson's Neverland, Santa Ynez Valley, California sanadkii 1991 -kii.
Aroosyada had iyo jeer waa dabbaaldeg farxad leh oo ku dhawaad ​​qof walba ku riyooda inuu yeesho aroos kaamil ah.
Haddii aad ku riyoonayso inaad yeelato aroos raaxo leh ama aroos miisaaniyadeed oo go'an ama xitaa haddii aad rabto inaad adigu qorshayso arooskaaga, waxa muhiimka ah waa in adiga iyo lammaanahaagu aad wada shaqaysaan oo aad qorshaysaan arooska labadiinaba waad ku raaxaysan doontaan.
Waa maalintaada, ka dib oo dhan, farxaddaadu waa muhiim; adiga iyo lammaanahaaga.
Kuwani waa aroosyada adduunka ugu qaalisan.
DIB U QAATO:
10 Guri Ee Ugu Qaalisan Aduunka Sanadka 2022
10ka Gabdhood Ee Ugu Quruxda Badan Adduunka 2022
9 Kitaab ee Ugu Awooda Badan Si Aad U Badasho Aragtidaada Nolosha
15 Barnaamijyada Qishka Qarsoon ee loogu talagalay Android sanadka 2021 | Ogow Xaaskaaga
Horumarinta teknolojiyadda, qofka aad jeceshahay wuxuu qarin karaa xiriirka isagoo gacan ka helaya taleefanka casriga ah. Casri ah…
Sida Loo Noqdo Maareeye Wanaagsan
Maareynta waa hab ku lug leh keenista farshaxanka, sayniska, iyo farsamada gacanta oo ay weheliso kaalmada maamulaha.…
10 -ka Madal ee Chatbot ee ugu sarreeya sanadka 2022 | La Bixiyay oo Bilaash ah
Khibrada macmiilka iyo qanacsanaanta macaamilka ugu badan waa laba arrimood oo muhiim ah oo qeexa guusha ganacsiga, iyo…
Helitaanka shahaadada MBA waxay leedahay faa'iidooyin aan la tirin karin, laga bilaabo kobcinta shabakadaha shaqada kuwaas oo qiimo u leh helitaanka iyo qoto-dheeraynta…
Haddii aad ka fekereyso sidii aad u bilaabi lahayd ganacsi sawir-qaadis, waxaan filayaa inuu jiro taraafikada…